I-India inokuhamba ihlela i-Bitcoin njengeklasi ye-asethi- iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » I-India iyakwazi ukuhambisa i-Bitcoin njengeklasi ye-asethi
tag: Udidi lweeasethi zeBitcoin, Udidi lweeasethi zeBitcoin, Imali engezantsi yedijithali ngo-XNUMX, Imali engezantsi yedijithali ngo-XNUMX
I-India, eyaqala yabonisa ubutshaba obuninzi kwi-cryptocurrensets, ngoku igunyazise ikomiti ekulindeleke ukuba ingenise isindululo esiyidrafti kwikhabhinethi kungekudala.
Emva kwembali ye-El Salvador yokuthatha i-Bitcoin njengemali ye-fiat (iyenza imali epheleleyo- umzekelo ophambeneyo!), Nditsho naseIndiya imali enomdla kwi-cryptocurrency inokuphefumla.
Imithombo ebalulekileyo emva kolu shishino yathetha nomshicileli Indian Express ukuba urhulumente usukile kwimeko yakhe yobutshaba ejongene nemali ebonakalayo kunye nokunye okuninzi iya kuthi ihlele iBitcoin njengeklasi yeeasethi kungekudala eIndiya.
Umlawuli wentengiso Izokhuseleko kunye neBhodi yokuThengisa ye-Indiya (SEBI) iya kongamela imigaqo yoshishino lwemali engaphenduliyo emva kokuba iBitcoin ihlelwe njengodidi lweeasethi. Umzi mveliso waseIndiya wemali yedijithali ukwathetha noMphathiswa Wezemali malunga nokwenziwa kwemithetho emitsha, kwaye nemithombo yoshishino ibonisa ukuba iqela leengcali zenkonzo lifunda lo mbandela. Idrafti yommiselo wolawulo lwemali engemali iya kubakho ePalamente.
Olu phuhliso luza kwiintsuku nje emva kokuba iBhanki enguVimba yaseIndiya (i-RBI), isetyhula ijolise kwiibhanki yeka ukunqanda ukuthengiselana kubandakanya iithokheni ezibonakalayo icaphula isetyhula yayo yangaphambili ukusuka kwi-2018, njengoko ibichithwe yiNkundla ePhakamileyo. Irhuluneli ye-RBI uShakthikanta Das, nangona kunjalo, waphinda amathandabuzo akhe.
"Singatsho ngokuqinisekileyo ukuba ikomiti entsha esebenza kwimali ekugcinwa kuyo imali inethemba elikhulu malunga nommiselo kunye nomthetho weemali ezigcina imali ... Isindululo esitsha siyakubekwa kwikhabhinethi kungekudala, esiza kuvavanya imeko ngokubanzi kwaye sithathe elona nyathelo lilungileyo lokuya phambili. Siqinisekile ukuba urhulumente uzakwamkela imali ye-cryptocurrensets kunye ne-blockchain technology". Amagama aphuma kuKetan Surana, igosa eliyintloko lezemali kunye nomlawuli, uCoinsbit, kunye nelungu, i-Intanethi kunye noMbutho weSelfowuni waseIndiya.
Iphepha lemhlophe ngu I-Indiatech iphakamisa ukuba ukwamkelwa kwe-Bitcoin kweIndiya njengodidi lweeasethi ezizezinye kukamva eliyinyani. Ngenxa yokuba indalo eguqukayo Iimali zedijithali (amaxabiso ayatshintsha-tshintsha mihla le) - olu xwebhu lubhala - kunzima ukuzisebenzisa njengesixhobo sokuhlawula. Olu xwebhu lukwacebisa ukurhafisa utyalo-mali lwe-cryptocurrency, lubenza ukuba babe phantsi kwerhafu yokufumana imali phantsi komthetho weRhafu yeNgeniso.
Hitesh Malviya, ingcali kwi blockchain kunye notyalo-mali lwe-crypto, uthe: "Ngokoluvo lwam, urhulumente wase-India uzakuphonononga indlela yokufumana i-Bitcoin yesiqhelo. Andiqondi ukuba i-India iyakuthathela ingqalelo ukwamkela i-Bitcoin njengemali ye-fiat kungekudala, njengoko izakuchaphazela kakhulu i-Indian rupee. Ukwamkela i-Bitcoin njengemali ebotshiweyo ngumbono olungileyo kwezo ntlanga zingenayo imali yazo okanye zixhomekeke kwidola yaseMelika ”.
€ 189,90 (ukusukela nge-30/06/2022 19:59 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
€ 24,99 (ukusukela nge-01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
€ 13,00 (ukusukela nge-01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
€ 13,99 (ukusukela nge-01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)
€ 29,90 (ukusukela nge-01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziKwaye ziya kutshintsha. Naliphi na ulwazi malunga nalo mbandela lufumaneka kwi-Amazon.com, njengoko kusebenza ngexesha lokuthenga.)